ပထမဆုံးအကြိမ် ချီးမြှင့်မယ့် ယူ-၂၁ Ballon d'Or ဆုကို ဘယ်သူ ဆွတ်ခူးသွားမလဲ
ယူ-၂၁ Ballon d’Or ဆု ဆန်ခါတင် (၁၀)ဦးစာရင်း ထွက်ပေါ်လာပြီ
9 Oct 2018 . 10:39 AM
နာမည်ကြီး ပြင်သစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းဟာ ဒီနှစ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်ချီးမြှင့်မယ့် ယူ-၂၁ Ballon d’Or ဆုအတွက် ဆန်ခါတင်(၁၀)ဦးကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းက Ballon d’Or ဆုအပြင် ယူ-၂၁ Ballon d’Or ဆု၊ ဥရောပအကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဘောလုံးသမားဆုတွေကို ဒီနှစ်ကစတင် ချီးမြှင့်သွားမှာပါ။ ယူ-၂၁ Ballon d’Or ဆုကို Trophee Kopa လို့လည်း နာမည်သတ်မှတ်ထားပြီး Ballon d’Or ဆုကို ၁၉၅၈မှာ ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ပြင်သစ်ကစားသမား ရေမွန်ကိုပါ Raymond Kopa ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Trophee Kopa လို့ သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆုအတွက် ဆန်ခါတင်(၁၀)ဦးစာရင်းမှာ လက်ရှိ ဘောလုံးလောကရဲ့ အထွန်းတောက်ဆုံး ကြယ်ပွင့်တွေဖြစ်တဲ့ ဘာပေ Mbappe ၊ အလက်ဇန္ဒားအာနိုးလ် Alexander-Arnold ၊ ဂျက်စတင်ကလွိုက်ဗတ် Justin Kluivert ၊ ပူလီရှစ် Pulisic စသူတို့ ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး PSG အသင်းရဲ့ ပြင်သစ်လူငယ်ကြယ်ပွင့် ဘာပေက ဒီဆုကို ဆွတ်ခူးဖို့ ရေပန်းစားနေပါပြီ။ ယူ-၂၁ Ballon d’Or ဆု ချီးမြှင့်ရေး ဒိုင်လူကြီးအဖွဲ့မှာတော့ ၁၉၅၈ ခုနှစ်ကနေ လက်ရှိအချိန်အထိ Ballon d’Or ဆု ဆွတ်ခူးခဲ့ကြသူတွေ အားလုံး ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး အဲဒီထဲမှာ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo နဲ့ မက်ဆီ Messi တို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ(၃)ရက်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်လို့ ပထမဆုံး ယူ-၂၁ Ballon d’Or ဆုကို ဘယ်သူ ရရှိသွားမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . .
ယူ-၂၁ Ballon d’Or ဆု ဆနျခါတငျ (၁၀)ဦးစာရငျး ထှကျပျေါလာပွီ
နာမညျကွီး ပွငျသဈဘောလုံးမဂ်ဂဇငျးဟာ ဒီနှဈမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ စတငျခြီးမွှငျ့မယျ့ ယူ-၂၁ Ballon d’Or ဆုအတှကျ ဆနျခါတငျ(၁၀)ဦးကို ထုတျပွနျကွညောလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ ပွငျသဈဘောလုံးမဂ်ဂဇငျးက Ballon d’Or ဆုအပွငျ ယူ-၂၁ Ballon d’Or ဆု၊ ဥရောပအကောငျးဆုံး အမြိုးသမီး ဘောလုံးသမားဆုတှကေို ဒီနှဈကစတငျ ခြီးမွှငျ့သှားမှာပါ။ ယူ-၂၁ Ballon d’Or ဆုကို Trophee Kopa လို့လညျး နာမညျသတျမှတျပွီး Ballon d’Or ဆုကို ၁၉၅၈မှာ ဆှတျခူးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ပွငျသဈကစားသမား ရမှေနျကိုပါ Raymond Kopa ကို ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ Trophee Kopa လို့ သတျမှတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီဆုအတှကျ ဆနျခါတငျ(၁၀)ဦးစာရငျးမှာ လကျရှိ ဘောလုံးလောကရဲ့ အထှနျးတောကျဆုံး ကွယျပှငျ့တှဖွေဈတဲ့ ဘာပေ Mbappe ၊ အလကျဇန်ဒားအာနိုးလျ Alexander-Arnold ၊ ဂကျြစတငျကလှိုကျဗတျ Justin Kluivert ၊ ပူလီရှဈ Pulisic စသူတို့ ပါဝငျခဲ့ကွပွီး PSG အသငျးရဲ့ ပွငျသဈလူငယျကွယျပှငျ့ ဘာပကေ ဒီဆုကို ဆှတျခူးဖို့ ရပေနျးစားနပေါပွီ။ ယူ-၂၁ Ballon d’Or ဆု ခြီးမွှငျ့ရေး ဒိုငျလူကွီးအဖှဲ့မှာတော့ ၁၉၅၈ ခုနှဈကနေ လကျရှိအခြိနျအထိ Ballon d’Or ဆု ဆှတျခူးခဲ့ကွသူတှေ အားလုံး ပါဝငျခဲ့ကွပွီး အဲဒီထဲမှာ လကျရှိ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကစားသမားနှဈဦးဖွဈတဲ့ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo နဲ့ မကျဆီ Messi တို့လညျး ပါဝငျခဲ့ကွတယျ။ ဆုပေးပှဲအခမျးအနားကို ဒီဇငျဘာ(၃)ရကျမှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာဖွဈလို့ ပထမဆုံး ယူ-၂၁ Ballon d’Or ဆုကို ဘယျသူ ရရှိသှားမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . .